'Fedhii muuziqaa nan qaban ture, poolisummaas nan jaaladha' Dubartoota miseensa Maarsh Baandii Oromiyaa - BBC News Afaan Oromoo
'Fedhii muuziqaa nan qaban ture, poolisummaas nan jaaladha' Dubartoota miseensa Maarsh Baandii Oromiyaa
'Fedhii muuziqaa nan qaban ture, poolisummaas nan jaaladha'
Ayyaanni uummataa, kan mootummaafi ayyaanoti amantii addabaabaayitti yoo kabajaman gareewwan maarsh baandii ayyaanicha meeshaa muuziqaa tapahataniin ho'isan arguun waan barame.
Dubartii fuuldura deemaa ulee hojjaasheerraa xiqqoo hanqatu ol furguggisaa laqam gootu, dubartoota faaggaa ammayyaa afuufaa uummata harka fuudhaa darbanii fi dhiirota waliin ulee qalloo cimdiin dibbee rukutaa do'ii muuziqichaa warra miidhagsan keessaati.
Maarsh baandiin Poolisii Lafoo Oromiyaa bara 1997tti kan hundaa'e yoo tahu miseensoti isaa dubartoota ta'anis yeroosuma waliin hojii jalqaban.
Miseensoti dubartootaa maarsh baandichaa magaalaa Adaamaatti argaman muuxannoofi seenaa isaanii nuu qoodaniiru.
Saajina olaantuu Masaay Waggaarii, garee maarsh baandichaaf dibbee rukutu, meeshaa muuziqaa kana taphadha jedhee yaadee hin beeku, ''ergan of baree garuu maarsh baandii Raayyaa Ittisa Biyyaafi kan Federaalaa yoon argu otoo akkas tahee jedheen hawwa ture.'' jedhan.
''Dubartii taateef dhiira taateef otoo hin taane ogummaan kamiyyuu hanga bartutti bu'aa bahii mataasaa qaba.'' Muuziqaan ammoo bartee booda yoo taphattu si gammachiisa, jedhu.
''Akka Oromiyaatti maarsh baandiin kuni isa jalqabaafi ammallee kan jiru nu qofa waan ta'eef eessayyuu yoo deemte uummatni si jaalata, bitaafi mirgaan si waliin hiriiree si jajjabeessa'' jedhu.
Saajina olaantuu Masaay Waggaarii, maarsh baandichi pireezidaantii duraanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatiin akka hundaa'es dubbatu.
Waltajjiiwwan Ministirri Mummee Abiy Ahimad irratti argaman dabalatee ayyaanota lakkoofsaan hin beekne baayyee irratti akka hirmaatan nutti himaniiru.
Hojii isaanii yeroo hundayyuu uummatni akka haaraattii akka ilaalu dubbatu.
''Gaafa jalqabnu ulee murreetu isaan leenji'aa turre, ammoo harki keenya dhiita'ee bishaan kuusa ture, fedhii waan qabduuf garuu baraa deemta'' kan jedhan immoo Saajin olaantuu Balaaynash Gammachuu, ulee daddarabachuu taphatu.
Namoonni dubartummaa keenyaan meeshaa kana qabannee gaafa deemnu ''akkamitti bareeddu'' jechuun akka keenya tahuu akka barbaadan nutti himu, ijoolleen dubartootaa keessumaa akkamittiin bartanii jedhanii nu gaafatu jedhu.
Ijoolleen dubartootaa fedhii qabaannaan meeshaa muuziqaa taphachuu qofa osoo hin taane isaa ol waan taheyyuu fiixaan baafachuu akka danda'an itti himuun barbaadas jedhaniiru.
Saajina gargaartuu Yaalamzarf Raggaasaa immoo garee maarsh baandii kanatti dhiyeenya warra makaman keessaa dha. Meeshaa Islaayid Tiroomboolii jedhamu taphatti.
''Jaalala muuziqaa nan qaba,'' iddoo poolisummaaf leenjinutti immoo dhufanii warra fedhii muuziqaa qabnu nu galmeessanii ulaagaa barbaachisu guutuun nama 20 taaanee darbinee jetti.
''Mana barumsaa keessatti ijoollummaa koorraa kaasee gumiiwwan dagaagina Afaan Oromoo keessaatti hirmaachaan waan tureef muuziqaanis keessa ture, achumaan carraa kana argannaan nan gale '' jetti Saajina gargaartuun Yaalamzarf.
Meeshaan muuziqaa taphachuu barbaaddu saaksifooni haa tahuyyuu malee sababii ulaagaa meeshichi barbaaduun meeshaa amma taphattutti akka itti fufte BBCtti himtee jirti.
''Ijaa ulfaatuuf nan danda'a jedhee hin yaadun ture, amma immoo muuziqaa irratti ramadame yoo taphadhu nan gammada.''
Muuziqaan kuni kan warra kaan irra adda dha kan jettu Yaalamzarf ''alatti yoo muuziqaa dhageechuu namni tokko hin sirbaa inni kaan meeshaa muuziqaadhaan deggara.
Inni kuni garuu, iddoo meeshaas iddoo namaas bakka bu'eetu daandii gubbaa irratti yoo xiqqaate namoota sadeeetamaa oliin waan taphatamuuf muuziqaa isa kaanirraa adda dha,'' jetti.
''Muuziqaan ofii kee sammuu kee bohaarsaa gaddaafi gammachuu yoo ibsitu sitti tola,'' jetti. Haatahu malee duraan poolisii tahuuf akka leenjite kan himtu Saajina gargaartuu Yaalamzarf ergasii carraa barachuu argannaan muuziqaas akkuma hojii poolisummaa akka jaalattes dubbatti.
''Poolisummaas nan jaaladha ergan dhufee maarsh baanditti makamee immoo muuziqaas akkanuman jaaladhe,'' jetti.